Koox hubeysan oo fal dil ah ka fulisay Magaalada Beledweyne iyo Faahfaahin laga helay.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Koox hubeysan oo fal dil ah ka fulisay Magaalada Beledweyne iyo Faahfaahin laga helay.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wararkii laga helayo magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in koox hubeysan ay fal dil khaarijin ah ka fulisay caawa magaaladaasi.
Dableyda ayaa weerar ku qaaday askar la socday Mooto Bajaaj xilli uu marayey xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne, waxaana lagu furay rasaas keenay inuu geeriyoodo, waxaana goobta ka baxsaday kooxdii dilka geysatay.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in askariga ladilay ee saarnaa Mooto Bajaajta laga qaatay Qori AK47 ah oo uu watay.
Ciidamada Amniga ayaa garay goobta dilku ka dhacay, waxaana ay baaritaan ka sameyeen halkaasi, inkastoo aanan lagu guuleysan in la qabto dableyda.
Previous articleDowladda Somaliya oo ka Carootay Warbixin Guddi ka tirsan Midowga Afrika ka diyaariyey xaaladda Dalka
Next articleLiiska Musharixiinta Maamulka Garbahaarey ee Axmed Madoobe soo magacaabayo (Akhriso magacyada)